स्वास्थ | मेरो लिम्बुवान
मोटोपनले पनि यौनेच्छा घटाउँछ ?
म २७ वषर्ीया विवाहिता महिला हुँ । म निकै मोटी छु । मेरो उचाइ ५ फिट २ इन्च मात्र छ तर तौल भने झन्डै ७० किलोग्राम छ । श्रीमान्सँग मेरो सुमधुर सम्बन्ध छ । उहाँलाई दैनिक जस्तो सहवासमा रुचि छ तर मलाई खासै रुचि छैन । १५ दिनदेखि १ महिनामा मात्र सर्म्पर्कको चाहना हुन्छ । मेरो श्रीमान्ले केही त भन्नुभएको छैन तर मैले उहाँको चाहना पूरा गर्न सकेको छैनजस्तो लाग्छ । यस कुराले मलाई निकै चिन्तित तुल्याएको छ । शरीरमा शक्ति नभएको जस्तो लाग्छ र स्फर्ूर्ति पनि छैन । मोटोपनको कारणले नै यसो भएको त होइन – यौनसम्बन्धी रुचि प्राप्त गर्न के गर्नुपर्ला – केही उपाय बताइदिनुभए आभारी हुने थिएँ ।
– सुष्मा देवकोटा
यौन सबै प्राणर्ीवर्ग र मानवजीवनको अभिन्न कुरा हो । प्राकृतिक रुपमा नै सबै स्वस्थ व्यक्तिमा यौनेच्छा हुन्छ । मानवमनमा यौनेच्छा हुनु एकदम स्वाभाविक हो । भोक, न्रि्रा, प्यासजस्तै यौन पनि आवश्यक कुरा हो । यो प्रकृतिले नै दिएको आधारभूत कुरा हो । मस्तिष्कमा यसलाई सञ्चालन गर्ने प्राचीन मस्तिष्कको भागले यो काम गर्ने गर्दछ । विकासको क्रममा करोडौं वर्षहिले त्यस किसिमको मस्तिष्क विकसित भएको देखिन्छ ।
कतिपय प्राणीजस्तै मानवमा पनि प्राचीन मस्तिष्कले भोक, न्रि्रा, प्यास अनि यौनलाई सञ्चालित गर्दछ । यौनव्यग्रता सञ्चालित गर्ने मस्तिष्कको भागलाई लिम्बिक सिस्टम भनिन्छ । यौनेच्छा जाग्ने र सोको व्यग्रतामा रागरस अर्थात् हर्मोनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
Categories: समाचार, स्वास्थ . . Author: याकथुम्बा . Comments: Leaveacomment